यस कारण अभिनेत्री सारा अली खानले आफ्नो आमाको घर चटकै छाडिन !! - Experience Best News from Nepal
१काँग्रेसका उपसभापति गच्छदार फरार, किन खोज्दैछ अख्तियार र सिआइबी ?
२विप्लवसँग एकता गरेर हतियार उठाउँने बैद्यको घोषणा
३आज आइतबार, तपाइको राशिफलले आजको दिनको बारे के भन्छ !! पढ्नुहोस राशिफल छोटकरीमा
४हाजार्डले मड्रिडमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन तर रोनाल्डोसंग तुलना उचित छैन !!
५पहिलो डेटमा नै युवतीलाई फिदा पार्ने पुरुषहरुका निम्ति सहज ६ टिप्स !! अपनाउनुहोस !!
६कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुने मिति तोकियो
७फिट केकीको ‘हट’ रूप (हेर्नुहोस् तस्बिरहरु)
८विश्व फुटबलका यी २० खेलाडी जसको मूल्यमा भयो ठुलो गिरावट !! १३ मिलियन देखि ४५ मिलियनसम्म गिरावट !!
यस कारण अभिनेत्री सारा अली खानले आफ्नो आमाको घर चटकै छाडिन !!
चलचित्र ‘केदारनाथ’ बाट बलिउडमा डेब्यू गरेकी अभिनेत्री सारा अली खानले त्यस लगत्तै फिल्म ‘सिम्बा’ मा पनि अभिनय गरिन् । फिल्म ‘सिम्बा’ बक्स अफिसमा सुपरहिट भएसँगै अभिनेत्री सारा अली खानको बलिउडमा निकै चर्चा भयो ।
साराको अभिनय र कन्फीडेन्सको चौतर्फी प्रशंसा पनि भयो । उनलाई बलिडकै क्षमतावान र पढेलेखेकी अभिनेत्री रहेको चर्चा पनि भयो । र अहिले सार्वजनिक खबरअनुसार अब सारा अली खान एक आत्मनिर्भर रहेको कुरा पनि साबित गरिदिएकी छिन् ।
खबरहरुका अनुसार हालसम्म आमा अमृता सिंहका साथ बस्दै आएकी सारा अली खानले एक्लै बस्ने निर्णय लिएकी छिन् । अमृता सिंह छोरी सारालाई लिएर निकै पाजेटिभ थिइन् । सारा हरेक कुरामा अमृता सिंहको सल्लाह अनुसार नै काम गर्थिन् । तर अब भने साराले आफ्नो लागि छुट्टै फ्ल्याट लिइसकेकी छिन् ।
सारा अली खान गाडीमा सामानहरु राख्दै गरेको तस्विरहरु सामाजिक सञ्जाल तथा मिडिया सार्वजनिक भएका थिए । ती तस्बिर सार्वजनिक भएसँगै मिडियाले सारा उनकी आमाको जुह स्थित घर छोडेर आफ्नो छुट्टै घरमा जान लागेको हुनसक्ने अनुमान लगाइएको थियो ।
त्यसपछि अहिले सारा अली खान आफैले सामाजिक सञ्जालमा एक तस्विर पोष्ट गरेकी छिन् । तस्बिरमा उनी सामानहरुको साथमा छिन् र क्याप्सनमा उनले ‘एक नयाँ सुरुवात’ लेखेकी छिन् ।
सारा अली खानले मात्रै नभई यस अघि अभिनेत्री आलिया भट्ट, अभिनेता वरुण धवन, रणबिर कपूरले पनि बलिउड प्रवेश गरेसँगै आफ्नो परिवारसँग छुट्टिएर आफ्नै घर लिएर उक्त घरमा शिफ्ट भएका थिए ।
भारतीय गायक सोनु निगम थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना
मिस नेपाल नीकिता चाण्डक द कपिल शर्मा सोमा
प्रकृति सँग रमाउँदै तेरिया मगर (हेर्नुहोस् तस्बिरहरु)
बाहूवलीकी शिवगामी देवी बनिन् पोर्नस्टार !!
लुगा खोल्दा कोइ थुक निले, कोइ छिरे बाथरुममा ! यो कस्तो दोहरी (हेर्नुहोस् पुरा भिडियो)
कुल्ली र बसका खलासी रजनीकान्त, कसरी बने चलचित्रका सुपरस्टार ?
BollywoodEntertainmentSara Ali Khan
मेस्सीको टिप्पणीमा नेय्मारले दिए बार्सिलोना फर्किने संकेत !!
अहिले नेय्मार बार्सिलोना फर्किने नफर्किने बारे चरम चर्चा